Ny lahatsoratr'i Gurpreet Purewal momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Gurpreet Purewal
Gurpreet Purewal dia filoha lefitra mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ao amin'ny iResearch, ireo manam-pahaizana momba ny fitarihana.
Torohevitra dimy lehibe hananganana paikadin'ny votoatin'ny fahaiza-mitarika
Sabotsy, Desambra 12, 2020 Sabotsy, Desambra 12, 2020 Gurpreet Purewal
Ny areti-mandringana Covid-19 dia nanasongadina fa mora ny manangana - ary manimba - marika iray. Eny tokoa, ny toetoetran'ny fifandraisan'ny marika dia miova. Ny fihetsem-po dia mpamatotra iray lehibe amin'ny fanapahan-kevitra, saingy ny fifandraisan'ny marika amin'ny mpihaino azy ireo no hamaritra ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny Covid. Manakaiky ny antsasaky ny mpanapa-kevitra no milaza fa ny votoatin'ny fahaiza-mitarika eritreritry ny fikambanana dia mandray anjara mivantana amin'ny fahazarany mividy, nefa ny 74% amin'ireo orinasa dia manana
Saturday, December 12, 2020 Saturday, December 12, 2020
Ny Podcasty farany
© Copyright 2022 DK New Media, Zo rehetra voatokana
Ahoana ny fampiasantsika ny mombamomba anao